HEDM sy Airtel Madagascar: miara-miasa ho an’ny lalam-piofanana roa lehibe | NewsMada
HEDM sy Airtel Madagascar: miara-miasa ho an’ny lalam-piofanana roa lehibe
Taona faharoa izao ny andiany voalohany ao amin’ny sekoly ambony tsy miankina momba ny lalàna sy ny fitantanana na ny HEDM (Hautes études en droit et en management) eny Soanierana. Ahitana lesoka ny fampianarana lalàna sy fitantanana nefa tsy vitsy ny tanora misafidy miditra amin’ireo sampam-pianarana ireo. Noho izany, takina ny maha matihanina, indrindra amin’izao vanim-potoana izao, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny HEDM, i Tsohara Sarobidy.
Amin’izay fampiharana ny maha matihanina ny fampianarana izay indrindra no nifanarahan’ity sekoly ambony ity sy ny Airtel Madagascar ho an’ny « formation en ligne » sy ny « formation en alternance ». Ny voalohany, fampiofanana maharitra 10 volana tsy misy fampivondronana mpianatra. Miainga avy amin’ny fampiharana teknolojia momba ny fifandraisana avo lenta (TIC) avokoa ny fampianarana any amin’ny toerana misy ny tsirairay manerana ny Nosy. Tolotra omen’ny Airtel ny tambajotra sy ny « clé », tsy misy fampiasana taratasy.
Fifehezana ny Tic
Ny faharoa, maharitra valo volana ho an’ireo mianatra sady miasa. Manome fiofanana ho an’ireo mpitantana orinasa, banky sy ny trano fiantohana. Mety hahazoana vatsim-pianarana izany na tambin-karama mandritra ny fiofanana. Tombony ho an’ireo manaraka lalam-piofanana ny fifehezana ny Tic, manampy amin’izany ny Airtel Madagascar.
Manome fiofanana manokana momba ny lalàna ny HEDM ho amin’ny fandraharahana; ny fitantanana (banky, trano fiantohana, varotra, fanondranana sy fanafarana entana). Samy ilaina amin’ny fampandehanana ny toekarem-pirenena ireo, indrindra hahazoan’ny tanora manangana orinasa ho azy. Handray anjara amin’ny “Salon de la rentrée”, ny 27 sy 28 septambra izao eny Andohatapenaka (Village Voara), ny HEDM, ho an’ireo tanora afaka bacc sy maniry handalina ny fahaizany.